राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभाग को स्थापना को उद्देश्य के हो ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के के विवरण समावेश हुन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको उद्देश्य के हो ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि कस्तो योग्यता चाहिन्छ र प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि निम्न लिखित योग्यता चाहिन्छ
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नेपाली नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगकर्ता को को हुन सक्छन् ?
सेवा प्रदायक निकायहरु
नागरिकता नभएको व्यक्तिले कसरी परिचयपत्र पाउँदछन् ?
राष्ट्रिय परिचय नम्बर भनेको के हो?